Fri, Dec 14, 2018 | 22:21:56 NST
प्रचण्डलाई राजेश हमालको बधाई !
बोमलाल गिरी/उज्यालो । काठमाडौं, जेठ १५ - सैनिक मञ्च टुडिखेलमा सोमबार नेताहरुको अनुपस्थितीले गणतन्त्र दिवस समारोहको कार्यक्रम नै खल्लो बनायो । तर दिउँसो शितल निवासमा भएको चियापान कार्यक्रममा नेता, कलाकार, विदेशी कुटनितिक नियोगका प्रमुखहरु, सेना प्रहरी लगायत थुप्रैको उपस्थिती थियो ।
४२ हजार वर्ष पुरानो बाँसुरी भेटियो
जेठ १३ – ४२ हजार वर्ष पहिला मानिसहरु गुफाभित्र आगो बालेर बस्थे, जनावरको हाडबाट बनेको बाँसुरी बजाउँथे र गीत गाएर साँझ कटाउँथे । हालसालै जर्मनीमा भेटिएका संगीत बाद्य यन्त्रले यसैको संकेत गर्छ ।
सुटिङका लागि विनिता बराल गोरखामा
भीमलाल श्रेष्ठ/उज्यालो । गोरखा, जेठ ११– चपली हाइटबाट ग्ल्यामरश छवी बनाएकी नायिका विनिता बराल नयाँ चलचित्र ‘फुलस्टप’मा फरक भुमिकामा देखिने भएकी छिन् । माता मनकामना प्रोडक्सन्सको व्यानरमा निर्माण हुन लागेको फूलस्टपमा ‘चपली गर्ल’ बराल र नायक सविन श्रेष्ठले विद्यार्थीको भुमिकामा अभिनय गरेका छन् ।
एसएलसी प्रिन्सेजको तयारी (फोटो फिचर)
काठमाडौं, जेठ ९ एसएलसी प्रिन्सेजमा सहभागि ४३ जना युवतीहरु फाइनल प्रतिस्पर्धाको लागि अहिले तालिममा व्यस्त छन् । सिजन मिडिया प्रालिले एसएलसी दिएर बसेका छात्राहरुको प्रतिभा प्रस्तुतिका साथै उनीहरुको क्षमता विकासका लागि पोहोरदेखि एसएलसी प्रिन्सेज सुरु गरेको हो । यो वर्षको प्रतियोगिताका लागि छनौट भएका प्रतियोगीहरुले गत बैशाख १८ गतेदेखि भृकुटी मण्डप स्थित नेपाल पुलिस हेल्थ क्लवमा प्रशिक्षण लिइरहेका छन् । प्रशिक्षणमा सहभागि युवतीहरुको फोटो फिचर । तस्विर सौजन्य : सिजन मिडिया...
रेखा र छविको यो कस्तो डिभोर्स !
सूर्यकुमार क्षेत्री/ उज्यालो । काठमाडौं, जेठ ९ - नायिका रेखा थापा र निर्माता छवि ओझा मंगलवारदेखि औपचारिक रुपमा छुट्टिएर बस्न सहमत भएका छन् । लामो समयदेखि एउटै घरको तल्लो तला र माथिल्लो तलामा बस्दै आएका रेखा र छविबीच मंगलवार बोलचाल भएको थियो । रेखाले नयाँ बानेश्वरमा रहेको छविको कार्यालय नमस्ते नेपालमा गएर आफू मम्मीसँग बस्ने भन्दै छविसँग अनुमति मागेकी थिईन् । रेखा र छविबीच बोलचाल गराउन भूमिका खेलेका र रेखाले अनुमति मागेका बेला सँगै उपस्थित रहेका रंग पत्रकार प्रकाश सुवेदीले भन्नुभयो ‘रेखाले ...
‘पत्याउनुहोस् मापसे चेकिङले पुस्तक बिक्री बढ्यो’
सूर्यकुमार/ क्षेत्री उज्यालो । काठमाडौं, जेठ ६ – ट्राफिक प्रहरीले मदिरा खाएर सवारी चलाउनेलाई कारवाही गर्न थालेपछि यसको व्यवसाय गर्नेलाई घाटा भएको छ । होटल, रेष्टुराँ, भोज भतेरमा मान्छेको उपस्थिति निक्कै पातलो छ ।
पैसा र बैंशले बन्छन् कलाकारहरु
सूर्यकुमार क्षेत्री/ उज्यालो । काठमाडौ – पर्दामा देखिन कत्तिको क्षमता चाहिन्छ ? त्यसका लागि कस्तो सीप र रुप चाहिन्छ ? धेरै दर्शकको मनमा उठ्ने यो एउटा प्रश्न हो । तर नेपालमा पैसा र बैंश खर्चिएर कलाकार बन्नेको कुनै कमी छैन । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा त्यस्ता कलाकारको बाढी नै आएको छ भन्दा अन्यथा हुन्न ।
इन्डियन आईडल प्रशान्त घलेगाउँमा
आश गुरुङ/उज्यालो । लमजुङ, जेठ ४– इन्डियन आईडल प्रशान्त तामाङ यतिखेर लमजुङको पर्यटकीय घलेगाउँमा छन् । हनिमुन मनाउन मुस्ताङसम्म पुगेका प्रशान्त घलेगाउँमा भने हनिमुन मनाउन आएका होइनन् ।
साहरुख खान नायकबाट खलनायक
जेठ ४ - इण्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा कोलकाता नाइड राइडर्सले मुम्बई इण्डियन्सलाई हराएको खुसीमा कोलकाताका मालिक साहरुख खानले आफू बलिउडको नायक भएको बिर्सिए । जितको खुसीमा खलनायक बन्दै खानले मुम्बईको बाङखडे स्टेडियममा सुरक्षाकर्मीलाई कुटपिट गरेका छन् ।
चलचित्र लुट बेल्जियममा
सन्तोष न्यौपाने/बेल्जियम,जेठ ४ — बेल्जियमको ब्रुज शहर स्थित एभरेस्ट नेप्लिज समाजले कास्की जिल्लामा भएको दैवि प्रकोपमा परेकाहरुको सहयोगका लागि चलचित्र लुटको च्यारिटी शो गर्ने भएको छ ।
रहिनन् ‘पा’ की तरुणी
काठमाडौं, जेठ २ – चर्चित बलिउड फिल्म ‘पा’मा औरोको साथीको भूमिकामा अभिनय बालकलाकार तरुणी सचदेवलाई सम्झिरहनुभएको छ ? बलिउडका चर्चित अभिनेता अमिताभ बच्चन, अभिनेता अभिषेक बच्चन र अभिनेत्री विद्या बालन अभिनित हिट फिल्म ‘पा’ की वालकलाकार तरुणी सचदेव अब हामीमाझ हुनुहुन्न ।
छविले छाडे रेखालाई
सूर्यकुमार क्षेत्री/उज्यालो । काठमाडौं, जेठ २ - निर्माता छविराज ओझाले नायिका रेखा थापालाई छोडेका छन् । पारपाचुकेको हल्ला चलिरहेका बेला निर्माता छविराज ओझाले आफ्नी पत्नीको नाममा रहेका रेखा फिल्मस् नामको व्यानर र पत्नी रेखा थापालाई नै छाडेर नयाँ चलचित्र बनाउने भएका छन् । निर्माता ओझाले रेखा फिल्म र रेखालाई छोड्न कै लागि छविराज प्रोडक्सन नामको फिल्म निर्माण कम्पनी दर्ता गरेका छन् । छविराज ओझाले छिट्टै बनाउन लागेको चलचित्रमा रेखा थापालाई समावेश नगर्ने भएका हुन् । चलचित्रका नामको न्वारन भैं नसके पनि...
‘भावना’को तस्बिर उत्कृष्ट
काठमाडौं, बैशाख २९ – फोटो पत्रकार नरेन्द्र श्रेष्ठले मेगा बैंक फोटो अफ दि इयरको उपाधि जित्नुभएको छ । फोटो पत्रकार क्लबले आयोजना गरेको फोटो प्रतियोगितामा श्रेष्ठले नगद ६१ हजार सहित १ लाख बराबरको पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ । कान्तिपुर दैनिकका फोटो पत्रकार श्रेष्ठले खिचेको अनुहारभरि रौँ पलाएकी दोलखाकी बालिका भावना थामीको तस्बिरले उत्कृष्ट फोटोको उपाधि जितेको हो । प्रतियोगितामा लक्ष्मीप्रसाद ङाखुसीले डेली लाइफ, यात्रा थुलुङले नेचर एण्ड वाइल्ड लाइफ, नरेन्द्र श्रेष्ठले न्युज फोटो ...
बन्दमा के गर्दैछन् कलाकार ?
मदन खनाल/उज्यालो । काठमाडौ, बैशाख २९– बन्दले सर्वसाधरण जस्तै कलाकार पनि मारमा परेका छन् । बिभिन्न समूहले गरेको बन्दका कारण नियमित कार्यक्रम स्थगित भएपछि नायक नायिका, गायक गायिका, अरु धेरै कलाकारले घरमै मुश्किलले दिन काटेका छन् ।
फेसबुकमा हनिमुनको कमेन्टले माल्भिका आक्रोशित
काठमाडौं, बैशाख २८ - केहीदिनअघि मात्र लगनगाँठो कसेकी पूर्व मिस नेपाल तथा अभिनेत्री माल्भिका सुब्बालाई कतिसम्म हैरानी दिइएको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ । त्यो कुरालाई अरु कसैले होइन उहाँ आफैंले आफ्नो फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
गुपचुपमै भयो बिष्णु माझीको बिहे
सूर्यकुमार क्षेत्री/ उज्यालो | काठमाडौं, बैशाख २८ - चर्चित लोक तथा दोहोरी गायिका बिष्णु माझीको बिवाह भएको छ । यसअघि देखि नै काठमाडौंमा एकैठाउँ बस्दै आएका सुन्दरमणी अधिकारीसँग माझीको बिवाह भएको हो ।
हाइवेलाई १६ लाख एडभान्स
ललितपुर, बैशाख २७ - अष्टेलियाको सोलाङ्चर कम्पनीले नेपाली चलचित्र हाइवेलाई अष्ट्रेलियामा पनि देखाउने भएको छ । हाइवेको थियट्रिकल राइटस् बापत सोलाङ्चरले हाइवेका निर्माता आदि प्रोडक्सन्सलाई १६ लाख रूपैयाँ अग्रिम भुक्तानी पनि दिएका छ ।
‘द लास्ट किस’लाई एडल्ट सर्टिफिकेट
काठमाडौं, बैशाख २६ – अश्लिल संवाद र दृश्यका कारण केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिसँग जुधिरहेको चलचित्र ‘द लास्ट किस’ले अन्ततः प्रदर्शन अनुमति पाएको छ । जेनिम फिल्मसको ब्यानरमा निर्माण भएको यो चलचित्रलाई सेन्सर बोर्डले १६ वर्षमाथिकाले मात्र हेर्न पाउने अर्थाथ एडल्ट सर्टिफिकेट प्रदान गरेको छ ।
राजेश हमालसँग बिहेको कुरा सुनेर म त अचम्मैमा परें : दिपा श्री निरौला
काठमाडौं, बैशाख २६ - विराटनगरबाट प्रकाशित हुने विराटपथ दैनिकले नायक राजेश हमाल र टेलीचलचित्रकी नायिका दिपा श्री निरौलाबीच विहे हुने भन्ने समाचार प्रकाशित गरेपछि मंगलवार दिनभर राजेश हमाल र दिपा श्री निरौलाको चर्चा भयो । त्यो समाचारको सत्यताका बारेमा दिपा श्री निरौलाको कुरा भनें अर्कै छ । कुराकानीका क्रममा दिपा श्रीले भनेका कुरा जस्ताको तस्तै । आज विहानै मैंले पनि राजेश दाईसँग मेरो विवाह हुने भनेर कुनै पत्रिकाले समाचार छापेको छ रे भन्ने सुनें । समाचार सुनेर त म अचम्ममा परें । पत्रिका खोजें ...
मेगा बैंक फोटो प्रतियोगितामा १ सय ३८ फोटो छानिए
काठमाडौं, बैशाख २६ – मेगा बैंक फोटो प्रतियोगिता २०६८ का लागि १ सय ३८ फोटो छनोटमा परेका छन् । प्रतियोगितामा देशभरबाट ८ सय व्यवसायिक र एम्योचर फोटोग्राफरले पठाएका ७ हजार फोटो मध्ये १ सय ३८ फोटो छनोटमा परेको आयोजक फोटो पत्रकार क्लबले जनाएको छ ।
श्रृष्टि भइन् मिस नेपाल (भिडियो)
काठमाडौ, बैशाख २५– यस वर्षको मिस नेपाल चितवनकी श्रृष्टि श्रेष्ठ भएकी छन् । मिस नेपालको १९ औ संस्करणको आइतबार राती भएको कार्यक्रममा श्रेष्ठले १६ जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै ‘नेपाल २०१२’ को ताज पहिरिन सफल भएकी हुन् । उनले ५० हजार रुपैयाँ र स्कुटी पनि जितिन् ।
किन अश्लिल हुँदैछन् नेपाली चलचित्रहरु ? (अडियो सहित)
सुर्यकुमार क्षेत्री/उज्यालो -- केहि समय अघि निर्माण भएर प्रदर्शनमा आएको चलचित्र लुट त्यसमा प्रयोग भएको संवादकै भरमा चल्यो ।
शुक्रवारदेखि दुई फिल्म (भिडियो सहित)
काठमाडौ, बैशाख २१ – शुक्रबारदेखि नेपाली चलचित्रहरु ‘फूल’ र ‘सम्झिराख है’ प्रदर्शनमा आउने भएको छ । शिब रेग्मीको निर्देशन रहेको ‘फूल’ देशभरि प्रदर्शन हुदैछ भने रेम बिकद्वारा निर्देशित ‘सम्झिराख है’ काठमाडौ बाहिरका केही हलबाट रिलिज हुदैछ ।
लोक दोहोरी अवार्ड हुने
काठमाडौं, बैशाख १९ - नेपालमा पहिलो पटक लोक दोहोरी अवार्ड वितरण हुने भएको छ । लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान उपत्यका समन्वय समितिले अवार्ड वितरण गर्न लागेको हो ।
‘जिन्दगानी दर्पण छायाँ’को गीतलाई प्रतिबन्ध
काठमाडौ, बैशाख १७ – चलचित्र जिन्दगानी दर्पण छाँयाको एउटा आइटम गीत र भिडियोलाई नेपाल टेलिभिजनले रोक लगाएको छ । नायिका सुष्मा कार्कीको आइटम नृत्य रहेको यति यति पानी गंगै रानी बोलको गीतमा नेपाल टेलिभिजनले प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
एसएलसी प्रिन्सेसका लागि ५० जना छानिए (नामावली सहित)
काठमाडौं, बैशाख १७ - एसएलसी प्रिन्सेस २०१२ को लागि प्रारम्भिक चरणमा ५० जना युवती छनौट भएका छन् । आवेदन दिएका ६२ जनामध्येबाट पहिलो चरणमा ५० जना छनौट भएका आयोजक सिजन मिडिया प्रालिका प्रदीपराज वन्तले जानकारी दिनुभयो । काठमाण्डौ वार्सिलोना एजुकेशन नेटवर्कका वोर्ड अफ डाइरेक्टर दिपक लिम्वु , रेडन कलेजका शिक्षक कमल पाण्डे, मिस इकलेज २०१० फष्ट रनर अप सुश्री सोनीया श्रेष्ठ ,एजेडव्लु ए लेवल कलेजका प्रवन्ध निर्देशक नविनमान श्रेष्ठ, शुभतारा स्कुलका शिक्षक प्रेम गुरुङ र कोरियोग्राफर रोजिन शाक्यको समुह...
विश्व नृत्य दिवस मनाइँदै
काठमाडौं, बैशाख १७ - आइतवार अप्रिल २९ तारिख, विश्व नृत्य दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाईंदैछ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संघ युनेस्कोसँग सहकार्य गरेको इन्टरनेशनल थिएटर इन्ष्टिच्युटको अन्तर्राष्ट्रिय नृत्य समितिले सन् १९८२ मा पहिलो पटक यो दिवस मनाएको थियो ।
दलको कार्यालयमा साहित्यकारको कविता वाचन
हेमराज शर्मा/उज्यालो । दाङ, बैशाख १६– जेठ १४ मै संविधान घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै दाङका साहित्यकारहरुले शनिवार जिल्लाका प्रमुख दलका कार्यालयमा साहित्यिक कार्यक्रम गरेका छन् । राप्ती साहित्य परिषदको आयोजनामा साहित्यकारहरुले दाङको घोराहीमा रहेको एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको कार्यालयमा कविताको माध्यमबाट संविधानको माग गरेका हुन् ।
उज्यालोकर्मी क्षेत्री सम्मानित
काठमाडौ, बैशाख १६– लोकबाजा संग्राहलयले ठेट नेपाली बाजागाजा र लोकगीतको खोजमुलक खबरमा योगदान गरेवापत उज्यालो सहकर्मी सूर्यकुमार क्षेत्रीलाई सम्मान गरेको छ । संग्रहालयमा भएको कार्यक्रममा सहकर्मी क्षेत्रीलाई सम्मान गरिएको हो ।
'हेट स्टोरी' वयस्कका लागि मात्र
काठमाडौं, बैशाख ११ - नेपाली सेन्सर बोर्डले बलिउड फिल्म 'हेट स्टोरी'लाई सेन्सर गरी वयस्कका लागि मात्र देखाउन अनुमति दिएको छ । गत शुक्रवारदेखि नेपाली सिनेमा हलमा लाग्नु पर्ने हेट स्टोरी सेन्सर बोर्डले अनुमति नदिएको कारण प्रदर्शन हुन सकेको थिएन ।
नेपालमा कसरी खिचिन्थ्यो फोटो ?
विनोद ढकाल/उज्यालो । काठमाडौ, बैशाख १० –‘फोटो खिच्न भनेर परिवारका सबै मान्छे स्टुडियो सम्मै आइपुग्थे’ काठमाडौ गणेशस्थानको मुनीज आर्ट स्टुडियोका रविमुनी बज्राचार्य पहिलेका कुरा सम्झिंदै भन्नुहुन्छ ‘बच्चा जन्मदा, पास्नी, ब्रतबन्ध र विवाहमा फोटो खिच्ने मान्छे खोज्दै आउँथे ।’ तर प्रविधिले फड्को मारिसक्यो । पहिले फोटो खिच्न स्टुडियोसम्म धाउनेहरु अहिले क्यामेरा र मोवाइलले खिचेका फोटो छानेर मेमोरी कार्ड र पेनड्राइभमा लिएर प्रिन्ट गर्न आउँछन् । पहिले त खिचेका फोटो कस्तो आए...
पोखरामा रंगकर्मी संगठित
पोखरा, वैशाख ९ – सुस्ताउँदै गएको पोखराको रंगमञ्चको उत्थान गर्न नाटककार कृष्ण उदासीको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय पोखरेली नाट्य प्रतिष्ठानको तदर्थ समिति समेत गठन गरिएको छ । समितिको प्रथम उपाध्यक्ष हेमन्त पराजुली, द्धितीय उपाध्यक्ष घनश्याम लामिछाने, महासचिव विष्णु गौतम, सचिव अभिमन्यु बिक्रम राणा र कोषाध्यक्षमा प्रमिला तुलाचन रहनुभएको छ ।
झरनाको फेसबुकमा पनि अश्लिल डाइलग (भिडियो)
काठमाडौं, बैशाख ७ - अभिनेत्री झरना थापा र उनका श्रीमान सुनिलकुमार थापाले निर्माण गरेको चलचित्र फेसबुकले पनि लुट र चपली हाइटकै जस्तै अश्लिलतालाई पछ्याएको छ । चलचित्र सार्वजनिक त भएको छैन ।
पारिजात स्मृति दिवश मनाइँदै
काठमाडौ, बैशाख ५ – साहित्यकार पारिजातको स्मृति दिवस मंगलवार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईदैं छ । विक्रम सम्बत १९९४ सालमा भारतको दार्जिलिङ्मा जन्मेकी विष्णुकुमारी वाईवाले पारिजात उपनामबाट नेपाली साहित्यमा धेरै कृति लेख्नुभएको छ ।
युरोपमा नेपालीहरुको नृत्य प्रतियोगिता
सन्तोष न्यौपाने/उज्यालो । फ्रान्स, बैशाख ५ – फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको नेपालीहरुको यूरोप स्तरिय एकल नृत्य प्रतियोगितामा नेदरल्याण्डस्की सरिता हुमागाई पहिलो र समिरा बरुवाल दोश्रो हुनुभएको छ ।
भारतमा नेपाली मुलकी नायिकाको हत्या
मुम्बई, बैशाख ४ - भारतीय सिने उद्योग बलिउडमा अभिनय गरिसकेकी नेपाली मुलकी नायिका मिनाक्षी थापाको हत्या भएको छ। थापाको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा मुम्बई प्रहरीको अपराध विभागले २ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
झमकलाई मलेशियाबाट नेपालीको सम्मान
धनकुटा बैशाख २ – मदन पुरस्कार विजेता साहित्यकार तथा लेखक झमक घिमिरेलाई गृहजिल्ला धनकुटामा सम्मान गरिएको छ । बैदेशिक रोजगारीका लागि मलेशियामा पुगेका श्रमिकको संस्था अनाम मण्डली साहित्य समाजले नगद १ लाख १६ हजार १ सय सहित सम्मान पत्रद्वारा झमकलाई सम्मान गरेको हो ।
बेल्जियममा नेपाली वृत्तचित्र
सन्तोष न्यौपाने/उज्यालो । बेल्जियम, बैशाख २ – पत्रकार प्रवेश सुवेदीको वृत्तचित्र ‘रेस सेक्रेटस् ड्यू धौलागिरि’ आइतबार बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा प्रदशन हुने भएको छ । ब्रुसेल नेपाल मिलन केन्द्रले आइतबार गर्न लागेको नया वर्षको कार्यक्रम संगै वृत्तचित्रको प्रदर्शन गर्न लागिएको हो ।
सुरु भयो फोटो किपा एक्स्पो २०१२
काठमाडौं, बैशाख १ – नेपालमा फोटोग्राफीको विकास गर्ने उद्देश्यले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा फोटोकिपा एक्स्पो २०१२ सुरु भएको छ । क्रियटिभ डि प्रालिले गरेको एक्स्पो ३ गतेसम्म चल्नेछ ।
सकियो अन्तर्राष्ट्रिय मैथिली नाट्य महोत्सव
धर्बेन्द्र झा/ उज्यालो । जनकपुरधाम , बैशाख १ – अन्तर्राष्ट्रिय मैथिली नाट्य महोत्सव समापन गरिएको छ । जनकपुरमा भएको महोत्सवको अन्तिम दिन शुक्रबार दुई वटा नाटक मञ्चन गरिएको छ ।